Safiirka Mareykanka oo kulan siiyey Farmaajo iyo Labada Madaxweyne Goboleyd Jubblaland iyo Puntland | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Safiirka Mareykanka oo kulan siiyey Farmaajo iyo Labada Madaxweyne Goboleyd Jubblaland iyo...
Safiirka Mareykanka oo kulan siiyey Farmaajo iyo Labada Madaxweyne Goboleyd Jubblaland iyo Puntland
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in safaarada Mareykanka Soomaaliya ku leedahay ka shaqeeneyso in ay kulan albaabada u xiran yihiin ayna garwadeyn ka tahay isugu keento Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland.
Sida aan xogta ku helnay safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya Danjire Yamamoto ayaa wada dadaalkii ugu dambeeyay uu ku doonayo in uu isugu keeno Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda labada maamul ee diidan hab maamulkiisa.
Kulankan ayaa la filayaa hadii uu suurto galo in lagu qabto gudaha Xalane gaar ahaan xarunta Safaarada u ah dowlada Mareykanka, waxaana Safiirka Mareykanka siyaabo kala duwan ula kulmay Farmaajo iyo Madaxda labada maamul.
Dowlada Mareykanka ayaa cadaadis ku saareysa labada dhinac in ay kulmaan ayna kawada hadlaan sidii xal looga gaari lahaa khilaafka ka taagan doorashada iyo sidii isku soo dhawaansho loo sameyn lahaa.
Kulankan la isugu keenayo Farmaajo iyo Madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa imaanaya xili wali uusan furmin shir lagu waday Teendhada Afisiyooni isugu yimaadaan Madaxda DF iyo kuwa dowlad goboleedyada kadib markii shirkaasi diideen in ay ka qeyb galaan Deni iyo Axmed Madoobe.
Previous articleMadaxweyne Dani oo Cafis u Fidiyey Wariye ku xirnqa Garoowe
Next articleGolaha Bad baadinta Qaraka oo kalaqeyb galka shirka Xalane ku xiray Sharuudo
Dagaal saakay ka socda Duleedka magaalada B/weyne iyo maamulka Degmada...
Mohamed Abdullahi Mohamed - May 5, 2021 0
Wararka ka imaanaya saakay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya in uu halkaas ka socdo dagaal ku bilaawday Deg deg ah. Wararka ayaa...
Ilaa 10 qof oo rayid Afghani ah oo ...
Wasiirka arrimaha dibedda ee Lubnaan, oo iska casilay xilkiisa kadib...
Ururada bulshada rayidka ah oo Warsaxaafadeed ka soo saaray Rabshadihii ka...
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay Wafdi ka socda Beesha Caalamka oo...
awaar Maxamed oo ah siyaasi mucaarad ah oo ku xiran dalka...
Qadar oo ku biirtay wadamada ka walaacsan xaalada Soomaliya
Qarax dhimasha iyi dhaawac dhaliyey oo ka dhacay magaalada Muqdisho